The Voice Journal – Page 130 – The Voice Weekly Myanmar
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲတွေနည်းနေကြောင်း ကြားနေရတယ်။ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရင်လည်း ပုံမှန်တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်သလိုပဲလို့ ပြောနေကြတာတွေလည်း ကြားနေရတယ်။ ဒီတော့ အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မျှဝေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အခရာအကျဆုံးပါပဲ။ အစ၊ အလယ်၊...
Articles / Business & Economy
အဝိုင်းလေးလည်နေသည်ကို သည်းခံစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြဖူးသည်။ တစ်ဦးချင်းသုံး၊ အိမ်သုံး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မြန်မာ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းသည် မီးကျိုးမောင်းပျက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် နှစ်ပါးသွားခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်ကမူ မြန်မာတို့အတွက် ရွေးစရာသိပ်မရှိ။ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း(MPT) အပေါ်တွင် မှီခိုခဲ့ရပြီး အခြားအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း လက်တစ်ဆုပ်စာလုပ်ငန်းများထံမှ ရယူသုံးစွဲခဲ့ရသည်။ ယင်းမှာ...
ထရမ့်နှင့် ကင်၏ သမိုင်းဝင်စင်ကာပူထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲ Singapore Summit ကြောင့် ကိန်းဂဏန်းတစ်ရပ် ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲရောက်လာသည်။ ယင်းမှာ မြောက်ကိုရီးယားပိုင် နူကလီးယားထိပ်ဖူးတပ်ဆင်နိုင်သည့် ဒုံးပျံအရေအတွက်လည်း မဟုတ်၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အနီး ကင်းလှည့်နေသည့် အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောအရေအတွက်လည်း မဟုတ်။ ထိုတွေ့ဆုံပွဲအတွက် အိမ်ရှင်စင်ကာပူက...
ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို အစိုးရက ဖိတ်ခေါ်ခဲ့၊ ဖိတ်ခေါ်ဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်းများမှာ ဈေးကွက်ကို ဦးစွာရရှိထားသော်လည်း ငွေကြေးအင်အားကြောင့် နောက်ကောက်ကျခံခဲ့ရခြင်းများလည်းရှိနေပြန်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကစီဈေးကွက်တွင်မူ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းများမှာ ယိမ်းယိုင်လျက်ရှိပြီး အစိုးရ၏ အားပေးကူညီမှု မရရှိပုံကို Oway Ride...
ဆူညံလှသည့် အော်သံများကြောင့် (ရဂုံ) တောစပ်အလား ထင်မှတ်မှားနိုင်သည်။ ထိုဆူဆူညံညံ အသံများက အလျား ရှစ်ပေ၊အနံ လေးပေကန်ငယ်လေးအတွင်းမှ ထွက်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကန်ထဲတွင် ဟိုသည်ပြေးလွှားနေသည့် Insect (အင်းဆက်အုပ်စုဝင်) မည်းမည်း ပိုးကောင်ငယ်များ ဖြစ်သည့် ပုရစ်များပင်။ ယင်းနေရာမှာ...
ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာထားဖြင့် ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်အနီးတွင် မကြာခဏလမ်းလျှောက်နေလေ့ရှိသော အဘိုးအိုတစ်ဦး ရှိသည်။ သူ၏လက်နှစ်ဖက်တွင် ပလက်တီနမ်နှင့် ကြေးဝါလက်ကောက်များလည်း ဝတ်ဆင်ထားသည်။ သူကား တစ်ချိန်က မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုများတွင် ပရိသတ်နှင့် လွန်စွာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိခဲ့သည့် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးစံမတူ ဖြစ်သည်။ အသက် ၈၆ နှစ်အရွယ်ရှိပြီ...
စာအုပ်နာမည်က ‘အာရုံပြားစရာတွေ များတဲ့ခေတ်မှာအောင်မြင်နည်း’ ဆိုတော့ လူတိုင်းနဲ့ ကိုက်တယ်။ ဒီကနေ့ခေတ်ဟာ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကိုအာရုံစူးစိုက်ဖို့ သိပ်ခက်တယ်။ ကလေးကနေလူကြီးထိ လူတွေဟာ အလုပ်သိပ်များတယ်။ သူတို့ရဲ့ အာရုံကို လုယူမယ့် အရာတွေကများလွန်းတယ်။ ဒီလိုလောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို လူတွေသိလက်ခံလာအောင်...
Page 130 of 264« First«...102030...128129130131132...140150160...»Last »